Kooxda Arsenal oo isku diyaarineysa in dalab cusub ay ka gudbiso Thomas Partey – Gool FM
(London) 06 Seb 2020. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in maamulka Arsenal ay isku diyaarinayaan inay dalab cusub ka gudbiyaan laacibka reer Ghana iyo kooxda Atletico Madrid ee Thomas Partey, inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Magaca Thomas Partey ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo Atletico Madrid xagaagan isla markaana uu u dhaqaaqo kooxda London ka dhisan ee Arsenal.
Wargeyska ayaa tilmaamay in maamulka kooxda Arsenal ay u arkaan Thomas Partey inuu yahay heshiiskooda ugu muhiimsan ee xagaagan, sidaas darteed waxay go’aansadeen inay dadaal walba ku bixiyaan sida ay ku dhameystiri lahaayeen heshiiskan.
Wargeyska wuxuu intaas ku daray in Arsenal ay u bandhigi doonto kooxda Atletico Madrid lacag iyo labada ciyaaryahan ee kala ah Mattéo Guendouzi iyo Alexandre Lacazette, si ay ugu guuleystaan ​​adeega Thomas Partey.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Atletico Madrid ay dooneyso 50 million euros si ay ugu ogolaato laacibka reer Ghana inuu baxo, laakiin maamulka Arsenal ayaa isku dayi doona inay yareeyaan lacagta, gaar ahaan maadaama ay doonayaan in heshiiska ay qeyb kaga dhigaan labada ciyaaryahan ee kala ahGuendouzi iyo Lacazette.
Dhinaca kale wargeyska “Marca” ayaa shaaca ka qaaday in Juventus ay sidoo kale xiiseyneyso saxiixa Thomas Partey, laakiin Arsenal ayaa loo arkaa inay tahay kooxda ugu cad cad ee ku guuleysan karta heshiiska Thomas Partey.